महिलाको शरिरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले टोकेर हो ? - Dainik Headlines
Home / Healthy Life / महिलाको शरिरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले टोकेर हो ?
Dainik Headlines April 22, 2019	Healthy Life
त्यसैले भूतको शंका हुनासाथ हाम्रो मानसपटलमा रहेको भूतको आकृति देखा पर्छ । फेरि हाम्रो पुख्र्यौली संस्कारले भूतको अस्थित्व र स्वरुप सिकाएकै छ । त्यही डरका कारण हामीले राती हिड्दा, कतै देख्दा यस्ता अस्तित्व देखें भनेर मानिसहरु अरुलाई भन्दै हिड्छन् । र अरुले पत्याइदिन्छन् । via~newsofnepal-nagariksamachar
Previous मुख धुँदा यी ५ गल्ती गर्नुहुन्छ, त्यहि भएर डण्डिफोर आउँछ….
Next कुन बारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? जानी राख्नुस्